Itshe lenyanga - I-Airbnb
Mumbai, Maharashtra, i-India
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Hema
U-Hema Ungumbungazi ovelele
Izwa ukuhlala okufudumele nokunethezekile ezindaweni ezingaphansi kwe-Mumbai. Balekela kulesi sikhala esiyimfihlo esinezinto ezimbili ezigcwele (Imibhede, ikhabethe lezingubo kanye ne-A/C). Ngaphesheya komgwaqo kukhona i-FoodHall isitolo esikhulu esihlome ngokugcwele kuzo zonke izidingo zakho eziyisisekelo. Itholakala kumgwaqo omkhulu Oxhumanisa enkabeni yeSantacruz, Khar kanye neBandra West. U-Carter Road ukude ngemizuzu eyi-10 uma uzizwa uthanda ukuhambahamba kusihlwa ngasohlangothini lolwandle. Ifaneleka kakhulu kulabo abazifunela indawo yokuhlala yangasese.
Ngamakamelo amabili ngamanye kanye negumbi lokuhlala ngeke uzizwe ukhawulelwe esikhaleni. Ifulethi alinakho ukuphazanyiswa komakhelwane abaseduze. Itholakala phakathi nendawo futhi iyimizuzu eyi-10 ukusuka kuCarter Road, imizuzu eyi-15 ukuya eJuhu beach. Ukuxhumana okulula kuthelawayeka, eningizimu yeMumbai ngisho nase-Andheri. Umgwaqo omkhulu unazo zonke izinhlobo zezitolo ezinkulu. Uma uthanda ukupheka, ikhishi lihlome ngokufanele futhi ngaphesheya kwesakhiwo unemakethe enkulu.
Umgwaqo omkhulu uwumgwaqo obanzi wezitolo. Ngenhlanhla ayikho engxenyeni ematasa kakhulu yomgwaqo i-Linking ngakho-ke usenokuthula kwakho. Uma ufuna ukuthenga ungavele uhambe uye noma ikuphi emagcekeni. Uma uthanda ukuhamba kusihlwa ungasebenzisa izindlela zokuhamba ukuze ufike ku-Carter road okuwuhambo lwemizuzu eyi-15-20.
Uma udinga noma yini I am call away futhi ngihlala endaweni efanayo. Uma udinga ukuboniswa ngingakwenza lokho ngenjabulo ngemva kwamahora okusebenza.
UHema Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mumbai namaphethelo